Marka waxaan ku xiri karnaa laba AirPods hal iPhone oo leh iOS 13 | Wararka IPhone
Waxaan sii wadaynaa tijaabada iOS 13 oo waxaan sii wadaynaa inaan layaabno awoodeeda, tan ugu dambeysa waa suurtagalnimada horey loo shaaciyey inta lagu gudajiray WWDC oo ah inaan dhagaysan karno laba AirPods oo leh hal il oo maqal ah, shaqeyn aan si buuxda u fahmin sababta aysan u imaan kahor kahor haddii qalabka lagama maarmaanka ah ayaa si buuxda u awood u leh.
Noqo sida ay doonto ha noqotee, Actualidad iPhone waxaan had iyo jeer kuu soo qaadanaa kii ugu dambeeyay ee casharrada, kuwii iOS 13na waa kuwa ugu badan ee maalmihii ugu dambeeyay. Nala joog oo soo hel sida aad ugu xidhi karto laba AirPods hal iPhone ah habka ugu fudud ee aad waligaa u malayn lahayd.
Waxaan kugula talinayaa si aan sax ahayn inaad aragto fiidiyowga aan dhawaanahan soo galnay kanaalka All Apple, taas oo aad ka heli doontid wararka SoyDeMac iyo iPhone Actualidad, maxaa yeelay marwalba way kafiican tahay inaad aragto sida ay ugu shaqeyso fiidiyowga halkii aad ka aqrin laheyd. Kuwani waa labada hanaan ee lagu gaaro:
Haddii adeegsadaha AirPods aan hayno lagu daray liiska xiriirka: Waa hagaag, kiiskan, isla marka aan furno AirPods-ka lammaanahayaga ah ee u dhow iPhone-kayaga, waxay ka muuqan doontaa menu-ka AirPlay, si fudud markaan bilaabanno inaan muusig ka ciyaarno AirPod-keena waxaan tagnaa Xarunta Xakamaynta> AirPlay oo waxaan riixnaa si aan u dooranno AirPod-yada kale. . Labaduba si otomaatig ah ayey isugu xiri doonaan.
Habka gacanta: Haddii qaabkii hore uu ku siinayo dhibaatooyin sabab kasta ha noqotee, si fudud u riix batoonka "dib u celi" oo ku yaal AirPods-ka saaxiibkaa oo ku xir iyaga sidoo kale iPhone-kaaga. Xaaladdaas markaa labadiinaba waad isku xirnaan doontaan waadna qaban kartaa wixii aan kor ku soo sheegnay dhibaato la'aan.
Markii aan isku xirno waxaan awoodi doonnaa inaan u maamulno heerka mugga shaqsi kasta oo ka mid ah AirPods, laakiin sidoo kale iyadoo lala kaashanayo menu cusub hoosta. Waxa aan awoodi doonin inaan sameyno waa adeegsiga AirPods iyo kuwa ku hadla isla waqti isku mid ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Marka waxaan ku xiri karnaa laba AirPods hal iPhone oo leh iOS 13
IOS 13 iyo macOS Catalina ayaa kuu ogolaanaya inaad ka soo gasho iCloud adoo adeegsanaya Face ID ama Touch ID
Apple waxay dib u soo celineysaa Samsung $ 683 milyan ka dib markii ay fulin weyday amarradii guddiga OLED